Itch.io: Ulo ahia mepere emepe maka egwuregwu vidio na nkwado maka GNU / Linux | Site na Linux
Itch.io: Ulo ahia mepere emepe maka egwuregwu vidio na nkwado maka GNU / Linux
Ingga n'ihu na isiokwu nke Egwuregwu bara uru, ngwa na / ma ọ bụ nyiwe vidiyo na GNU / Linux, iji kwado ma gosipụta nke anyị Free na Mepee Sistemụ nwere ike ma bụrụ, dịka ọ dị mma, dịka ndị ọzọ maka ebumnuche a, anyị ga-eleba anya n'okwu banyere Itch.io.
N'ezie ọ ka GNU / Linux nwere ike ịbụ n'azụ Windows ma ọ bụ MacOS n'akụkụ ụfọdụ, mana nke a na-abụkarị n'ihi enweghị mmasị nke ụlọ ọrụ nke teknụzụ ma ọ bụ nke azụmahịa, dị ka egwuregwu vidio, na ọ bụghị n'ihi njedebe nke teknụzụ nke anyị nwere ekele GNU / Linux ma ọ bụ enweghị nkwado site na Obodo ndị mmepe ma ọ bụ ndị ọrụ. Ma ọ bụ ezie, maka ugbu a Windows nọgide na-abụ onye isi na-enweghị atụ na mpaghara a, ọ bụkwa eziokwu na GNU / Linux ọ meela ogologo ụzọ na mpaghara a.
Dịka ọmụmaatụ, na Ndokwa anyi ekwuola otutu okwu Steam, otu mgbe ogologo oge gara aga banyere Lutris na nso nso banyere GameHub. Ugbu a, ọ bụ ntụgharị nke ngwa egwu egwu ọzọ akpọrọ Itch.io.
Na-ehota ndi mepụtara ya na ya ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị:
"Itch.io bụ ụlọ ahịa na-emeghe maka ndị okike dijitalụ nwere onwe ha na-elekwasị anya na egwuregwu vidiyo nke indie. Ọ bụ ikpo okwu nke na-enye onye ọ bụla ohere ire ọdịnaya ha mepụtara. Dị ka onye na-ere ere, ị na-ahụ maka otu esi eme ya: ị debere ọnụahịa ahụ, mee ahịa ahụ, ma chepụta ibe gị. Ọ dịghị mkpa ka ị nweta votu, mmasị, ma ọ bụ ịgbaso maka ọdịnaya gị ka akwadoro, ị nwere ike ime mgbanwe na otu ị si ekesa ọrụ gị oge ọ bụla masịrị gị. Itch.io bụkwa nchịkọta nke ụfọdụ ihe ndị kachasị iche, na-atọ ụtọ, na nke onwe gị ị ga-ahụ na webụ. Anyị abụghị ụlọ ahịa dijitalụ na-ahụkarị, yana ọtụtụ ọdịnaya, ma akwụ ụgwọ na n'efu, anyị na-agba gị ume ilegharị anya wee hụ ihe ị hụrụ".
1.1 Njirimara nyiwe
1.2 Ntinye Ngwa
1.3 Ngwa nseta ihuenyo
2 Ndi ozo ka Itch.io
2.1 Na GNU / Linux ma ọ bụ Multiplatforms
2.2 Banyere Windows
Ọ na-enye ndị okike ngwaọrụ iji mee mkpebi dị mma gbasara etu esi kesaa ọdịnaya ha. Ndị okike nwere ohere ị nweta nyocha zuru ezu yana etu ndị mmadụ si achọpụta, budata ma ọ bụ mepụtaghachi ihe ha kere. Na-enye mfe nnweta data nke uploads resonate kasị ma ọ bụ njikọ na-adọta ndị kasị anya
Ọ na-eme ka ọ dị mfe maka ndị okike iji nakọta ego maka ihe okike ha na-enweghị ụzọ mgbochi. N'agbanyeghị etu nnukwu ọrụ ahụ siri dị ma ọ bụ pere mpe, usoro a na-akwụ ọtọ maka ndị fan inye ma ọ bụ kwụọ ihe ha chere dị mma.
Ọ na-egosi na a zụrụ ihe niile na onyinye a ga-akwụ karịa opekata mpe. Agbanyeghị, enwere ike ịtọ ọnụahịa pere mpe na efu (n'efu), mana ọ nwere ike ịbụ na ndị fans nwere ike ịhọrọ ịkwado onye okike ma ọ bụrụ na ọ masịrị ihe ọ na-enye.
Ọ na-akwado ịhazi iwu, na-ere ụgwọ ọrụ, na -emepụta ọdịnaya nnabata n'oge, na-ejikọ ọdịnaya gị, yana ịba ụba nke ebumnuche oru ngo
Download Linux ngwa na gị Budata Nkebi.
Mmezu site na Ọnụ (njikwa) nke ebudatara ngwugwu dị na Budata folda, na iji iwu: chmod +x Descarga/itch-setup && Descargas/itch-setup.
Chere maka nbudata nke ihe ndi ozo nke ngwa a na ndi ozo nke ntinye aha ya.
Debanye aha n'elu ikpo okwu ma ọ bụ jiri akaụntụ njirimara anyị dị ugbu a banye.
Site ugbu a gaa n’ihu, anyị nwere ike inyocha ikpo okwu ahụ niile, ma zụta na / ma ọ bụ budata egwuregwu dịnụ.
Cheta na: Ọ dị mkpa icheta na o nwere ọtụtụ egwuregwu n'efu maka GNU / Linux enwere ike ịlele, budata ma kpọọ na enweghị nsogbu ọ bụla, ịnweta ha site na ịhọrọ akara «Egwuregwu Linux".
Ngwa nseta ihuenyo
Ndi ozo ka Itch.io
Na GNU / Linux ma ọ bụ Multiplatforms
Na nkenke, olee otu anyị ga-esi nwee ekele maka nke anyị GNU / Linux Sistemụ arụmọrụ dị ugbu a kpamkpam ziri ezi ma ọ bụ tozuru etozu, egwuregwu dị iche iche àgwà mara mma na ọkwa ama ama, ọ bụ ezie na onyinye dị adịghị dị ka nke dị Windows.
Ma, akwụkwọ akụkọ dị ugbu a abụghị naanị nnukwu ma ọ na-aga n'ihu na-eto kwa ụbọchị, na ukwu na mma. Ma ọ bụrụhaala na ahịa ahịa nke GNU / Linux na mpaghara a, ọzọ ụlọ ọrụ na ndị mmepe ga-enwe mmasị na ikpo okwu anyị magburu onwe ya GNU / Linux maka ngwaahịa gị.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Itch.io», ihe omuma ndi ozo di na ntanetị na ngwa nke egwuregwu, azụmahịa na n'efu, n'efu na imeghe, n'ihi na GNU / Linux na sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ, nwere nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Itch.io: Ulo ahia mepere emepe maka egwuregwu vidio na nkwado maka GNU / Linux
GIMP 2.10.18 biara na ngwakọta nke ngwa oru, ndozi na ihe ndi ozo